प्रविधिले तपाईको भर्ती प्रक्रियालाई सुधार गर्न सक्ने तरिकाहरू - Victor Mochere
by जेनिफर बिर्च
भर्ती र मानव संसाधन उद्योग द्रुत रूपमा विकसित भइरहेको छ, विशेष गरी जब यो काम फिट उम्मेद्वारहरूलाई आकर्षित गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र भर्ती गर्ने कुरा आउँछ। प्रत्येक मानव संसाधन कर्मचारीहरूले भर्ती प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न र गुणस्तरीय उम्मेद्वारहरू भाडामा दिनको लागि दैनिक गतिविधिहरू, कार्यहरूमा आफ्नै अनौठो स्पिन राख्न प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसोभए, आजकल भर्तीकर्ताहरूले के अनौठो तरिकाहरू अनुकूलन गर्दैछन्?
लामो, कठिन, र महँगो भर्ती प्रक्रियाबाट बच्न, भर्तीकर्ताहरूले उत्पादकता बढाउन, चीजहरू गति बढाउन, र सही समयमा सही कर्मचारी फेला पार्न HR उपकरणहरू र प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्। सम्भाव्यताको बढ्दो मागलाई हेरेर, उम्मेद्वारहरूद्वारा संचालित बजारमा जागिर उपयुक्त कर्मचारीहरू, नयाँ-युग भर्ती उपकरण र प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने प्रत्येक संस्थाको संकुचित वा सीमित आकारको भर्ती टोली।
टेक्नोलोजी र भर्ती बीचको सम्बन्ध बुझौं।
भर्ती आवश्यकताहरू बुझ्ने र प्रभावकारी काम विवरणहरू लेख्ने
सोर्सिङ र उम्मेदवारहरू आकर्षित
भर्ती प्रक्रियाको पहिलो चरण कम्पनीको भर्ती आवश्यकताहरू बुझेर र भूमिका र जिम्मेवारीहरूको सन्दर्भमा खाली जागिरको स्थिति पहिचान गरेर सुरु हुन्छ। कम्पनीको व्यापक (कम्पनीमा विभिन्न भूमिकाहरू भर्ना गर्ने) वा विशिष्ट (एउटा विशेष पदको लागि भर्ती) लाई ध्यानमा राख्दै, भर्तीलाई उपयोगी काम विवरण सिर्जना गर्न भर्तीकर्ताहरू चाहिन्छ। यो कामको भूमिकाको लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित छ।
कसरी प्रविधिले प्रभावकारी काम विवरण लेख्न मद्दत गर्छ?
एक प्रभावकारी काम विवरण भर्ती मार्केटिङ को एक भाग हो। यो पहिलो प्रभाव सिर्जना गर्ने र सम्भावित उम्मेद्वारहरूसँग जडान गर्ने मौका हो। त्यसोभए, पहिलो प्रभावमा सम्भावित उम्मेद्वारहरू हराउने जोखिम हटाउन, तपाइँ पाठ विश्लेषक उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्ती उपकरणले तपाईको भर्ती आवश्यकता अनुसार कामको विवरणलाई अप्टिमाइज मात्र गर्दैन तर यसको प्रभावकारिता पनि गणना गर्दछ र यसको उन्नत एल्गोरिदमको साथ समावेशी भाषाको सन्तुलन कायम राख्छ। तपाईंले जति धेरै आकर्षक र समावेशी कार्य विवरणहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, उति धेरै विविधताका उम्मेद्वारहरूलाई तपाईं आकर्षित गर्नुहुन्छ।
आजको उम्मेद्वार-संचालित रोजगार बजारमा, भर्तीकर्ताको लागि गुणस्तरीय उम्मेद्वारहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। आजकल, उम्मेदवारहरू केवल एक सभ्य तलब चाहँदैनन्, तर तिनीहरू कम्पनी संस्कृति, मानहरू, र उनीहरूको व्यावसायिक विकासको लागि स्कोप जस्ता कारकहरू खोज्छन्। त्यसोभए यस प्रतिस्पर्धी किनारामा गुणस्तरीय उम्मेद्वारहरूलाई कसरी स्रोत र आकर्षित गर्ने? सही भर्ती टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दै जसले तपाइँलाई तपाइँको संगठन को लागी एक काम फिट उम्मेद्वार भर्ती को हरेक पक्ष मा मद्दत गर्न सक्छ।
उम्मेदवारहरूलाई आकर्षित गर्न प्रविधिले कसरी मद्दत गर्छ?
भर्ती प्रविधिहरूले सही प्रतिभा खोज्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको उन्नत एल्गोरिदमले सम्भावित उम्मेद्वारको अनलाइन प्रोफाइलहरू पहिचान गर्दछ जसले सक्रिय र निष्क्रिय उम्मेद्वारहरूलाई आकर्षित गर्न र सोर्सिङ गर्न नेतृत्व गर्दछ। नयाँ उम्मेद्वार सोर्सिङ टेक्नोलोजीले तपाइँलाई तपाइँको आवेदक ट्र्याकिङ प्रणालीमा उम्मेदवारको अनलाइन प्रोफाईलहरू स्क्रिनिङ गरेर बाह्य र आन्तरिक उम्मेदवारहरूलाई स्रोत बनाउन मद्दत गर्दछ र तपाइँको हालको जागिर खोल्नको लागि एक आदर्श मिलान पहिचान गर्दछ। पहिलेका भर्तीकर्ताहरू र भर्ती गर्ने टोलीहरूले यसलाई सही र छिटो गर्न सकेनन्। तर भर्ना औजारको कार्यान्वयनले राम्रो प्रतिभालाई आकर्षित गर्न र सोर्स गर्न सहज भएको छ ।
भर्ती प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको उनीहरूको सीप, ज्ञान, र अनुभवको आधारमा उपयुक्त र कामका लागि उपयुक्त उम्मेद्वारहरू पहिचान गर्नु हो। तर भर्तीकर्ताहरूको लागि पुन: सुरुवात वा टेलिफोनिक अन्तर्वार्ता मार्फत उल्लेख गरिएका सीपहरूको आधारमा उम्मेद्वारहरूको मूल्याङ्कन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यद्यपि, प्रविधि द्रुत रूपमा विकसित हुँदैछ, र त्यहाँ धेरै पूर्व-रोजगार परीक्षण प्लेटफर्महरू छन् भर्तीकर्ताहरू र भर्ती प्रबन्धकहरूले छिटो काममा फिट उम्मेद्वारहरूको मूल्याङ्कन गर्न र भाडामा लिन प्रयोग गर्न सक्छन्।
उम्मेदवार मूल्याङ्कनमा प्रविधिले कसरी मद्दत गर्छ?
मानव संसाधन उद्योगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पीडा बिन्दु बढेको आवेदकहरू, समय र लागत उपभोग गर्ने परम्परागत मूल्याङ्कन विधिहरू, गरीब कामदारहरूको जोखिम, र उच्च कर्मचारी कारोबार हो। संगठनमा अन्य विभागहरू जस्तै, मानव संसाधन पनि उत्पादक हुन आवश्यक छ र संगठनको लागि गुणस्तर प्रतिभा भाडामा लिनुपर्छ। उम्मेद्वार मूल्याङ्कन उपकरण भनिने नयाँ भर्ती प्रविधिले उनीहरूलाई प्रक्रियाको गति बढाउन र आवेदकहरूको कामको सीप, व्यक्तित्व विशेषताहरू, र तार्किक तर्कको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
तपाइँको उम्मेद्वार स्क्रिनिङ वा मूल्याङ्कनमा टेक्नोलोजी समावेश गर्ने धेरै सुविधाहरू छन्। अल-आधारित उम्मेद्वार सीप मूल्याङ्कनहरूले आवेदक काममा फिट छ कि छैन र उसको कार्यसम्पादनको आधारमा संस्कृति उपयुक्त छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्दछ। यसले तपाईंको लागि सर्टलिस्टिङ उम्मेद्वारहरूलाई स्वचालित रूपमा स्क्रिनिङ, ग्रेडिङ गरेर खराब कामदारहरूको जोखिम हटाउँछ।
एकचोटि तपाईंसँग आफ्नो बाल्टिनमा गुणस्तरीय प्रतिभा छ, तपाईं भर्तीको अन्तिम चरणको लागि तयार हुनुहुन्छ जुन तपाईंको अर्को उत्कृष्ट कर्मचारीको अन्तर्वार्ता र भर्ती हो। यस चरणमा अनबोर्डिङ र प्रशिक्षण पनि समावेश छ। त्यहाँ अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, तर उद्योग, क्षेत्र र भूमिकामा निर्भर गर्दै, भर्तीकर्ताहरूले उपयुक्त तरिका छनौट गर्न सक्छन्।
उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्तामा प्रविधिले कसरी मद्दत गर्छ?
विगतका दशकहरूदेखि, प्रविधिले अन्तर्वार्ता लिने र उम्मेदवारहरूलाई क्रमशः फरक-फरक ठाउँमा कामको लागि अन्तर्वार्ता लिन र अन्तर्वार्ता लिन सजिलो बनाएको छ। भिडियो कलमा आयोजित अन्तर्वार्ताले तपाईंलाई उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्न अझ राम्रो तरिकाले मद्दत गर्नेछ जब तपाईंसँग पहिले नै आवेदकहरूको लामो सूची छ।
यसले वार्तालाप कौशल, टोन, शारीरिक भाषा, र प्रतिक्रियाशीलता जस्ता विशेषताहरू प्रकट गर्न सक्छ जुन टेलिफोनिक राउन्ड र CV धेरैले देखाउँदैनन्। भिडियो अन्तर्वार्ता उपकरणहरूले अन्तर्वार्ताको समयतालिका मात्र बनाउन सक्दैन, तपाईंको समय बचत गर्न सक्छ, तर यसले कुराकानीलाई रेकर्ड गर्दछ, र यसलाई तपाईंको सुविधामा हेर्नको लागि सुविधा प्रदान गर्दछ। आजकल, धेरै कम्पनीहरूले उम्मेदवार प्रश्नहरूको जवाफ दिन मद्दत गरेर अन्तर्वार्ताको लागि च्याटबटहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।
भर्ती टेक्नोलोजी एक बजवर्ड मात्र होइन। यो पहिले नै एक आवश्यक पूर्व शर्त भएको छ र भर्ती प्रक्रिया मा एक अभिन्न भूमिका खेल्छ। आजको प्रतिस्पर्धी बजारको मागलाई हेरेर, संस्थाहरूले भर्ती प्रक्रियामा दक्षता बढाउन उन्नत भर्ती प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। भर्ती मूल्याङ्कन उपकरणहरूले सजिलैसँग उम्मेद्वारहरूसँग जानकारी सङ्कलन, कोलेट र सञ्चार गर्दछ र भर्ती प्रक्रियालाई गति दिन्छ।
कसरी विघटनकारी प्रविधिहरूले रोजगारदाता ब्रान्डिङलाई असर गर्छ